နန်းစကား၊ မန်းစကား၊ မြန်မာစကား | The World of Pinkgold
D Soe on December 26, 2008 at 5:58 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အခုလို မသိတဲ့ မြန်မာစကားလုံးတွေကို ရှင်းလင်းပြောပြပေးတဲ့ အတွက်။ =)
strike on December 26, 2008 at 6:22 pm said:
chan on December 26, 2008 at 9:49 pm said:
နေ့အိပ်မက်က မြန်မာစာစိတ်ဝင်စားလို့လားမသိဘူး။ ဒီပို့စ်လေးကို တအားသဘောကျတာပဲ။ တချို့စာလုံးတွေက မသုံးတော့ပေမယ့် ကြားလိုက်ရင် အဓိပ္ပာယ်ကို မှန်းလို့ရတယ်နော်။ မမ.. အဲဒီစာအုပ်က ebookရှိလားဟင်။
strike on December 27, 2008 at 11:58 am said:
ပါလား ဟင်။…ဟိုမေမြို့ကပုံတွေကို ဓါတ်ပုံပီတာကတွေ့
ပြီးပင့်ပင့်ကိုသူ့ စတူဒီယိုမှာ လက်စွမ်းပြချင်နေတယ်တယ့်။
Pinkgold on December 28, 2008 at 7:27 am said:
နေ့အိပ်မက်ရေ.. အီးဘွခ်ကတော့ မမကိုယ်တိုင် စာရိုက်ပြီး လုပ်ပေးမှ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. လောလောဆယ်တွေ မတွေ့မိသေးပါဘူးကွယ်
Acacia on January 9, 2009 at 2:08 pm said:
အိမ် on January 10, 2009 at 5:56 pm said:
နောက်ထပ်ရှိရင်လဲ တင်ပါဦးဗျ မှတ်သား၇တာပေါ့ဗျာ။ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်
aungthuwann90 on April 5, 2009 at 4:01 pm said:
FYI, Dhoby means wash/washing. In Singapore, there’saplace called Dhoby Gaut and the word “Dhoby Gaut” literally means washing place. I would like to remind u that “Dhoby” is notaburmese word butaHindi word. Burmese adopted the Hindi word I guess. Btw, my sku is in Dhoby Gaut and City Hall…. ^-^